Were Mac gị kpọọ oku vidiyo n’ụzọ dị mfe nke nwere ihe ruru ndị ọrụ asatọ | Esi m mac
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke ngwaahịa Apple, ị ga-amata ohere nke inwe ike ịme oku vidiyo iji ngwa FaceTime. Na mbu Apple nyeere oku vidiyo ma emesịa wee FaceTime ọdịyo. Agbanyeghị, enwere oge na ọ bụrụ na ọ bụ akara ngosi WiFi na anyị nwere ma ọ bụ ọnụego data anyị hapụrụ anaghị eme ka ọkpụkpọ FaceTime dị mma enwere ike enwere nhọrọ ndị ọzọ dị.
Maka nke a, anyị na-ewetara n'isiokwu a nhọrọ ọhụrụ dịka ụwa nke nkata vidiyo na nke ahụ bụ na na egosi. Na anyị ga-enwe ike ịkpọ oku vidiyo n'ụzọ dị mfe yana protocol nke na-erepịa ihe ole ma ole site na kọmputa anyị ma ọ bụ site na ngwaọrụ iOS anyị.
Ọrụ nke bayyana.in dị mfe ma ọ bụ na -enwe ike iji ya na Mac anyị ga-abanye web. egosi.in site na ihe nchọgharị Google Chrome, Mozilla ma ọ bụ Opera. Maka ugbu a, ihe nchọgharị Safari anaghị enyere gị aka.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnweta ọrụ ahụ site na ngwaọrụ iOS, ị nwere ike ime ya n'ụzọ abụọ, ma ọ bụ site na nbudata ngwa site na ihe nchọgharị ndị anyị tụlere na nweta mkpokọta muuq.in ma ọ bụ jiri ngwa ahụ were aha ahụ budata ngwa ahụ.
Banyere ojiji ya, ọ dị mfe ma o zuru ezu na anyị banyere ọrụ ahụ, nye aha na «ụlọ» anyị chọrọ ike ma zipu ndị enyi anyị aha «ụlọ» ka ha nwee ike ijikọ ozugbo. Ruo ndị ọrụ 8 ga-enwe ike ijikọ n'otu oge, ya mere ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere Apple's FaceTime ọ nweelarị ndozi.
Ekwesiri ighota na iji oru a, inwere ike idebanye aha ma debanye aha aha "ulo" ka o nweghi onye nwere ike iji aha ahu ozo, ma obu tinye aha "ulo" di iche oge obula i banyere ma obu lee ma o di na nke ahu oge. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ nweghị nnukwu sayensị na mgbe ọ nwara ya ụbọchị ole na ole, ọ dị ka nhọrọ dị mma.
Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike ihu ihu nke onye na-agwa gị okwu, ma ọ bụrụ na ị na-esi na kọmputa na-agagharị, ọ ga-enye anyị ohere igosi ihuenyo anyị na-ahụ maka ndị ọzọ jikọtara na nke ahụ otu «ime ụlọ». Bụrụ na ịdenye na ịdenye aha ụfọdụ «ụlọ» oge ọ bụla ị na-agbalị jikọọ Ọ ga-arịọ PIN nke a ga-ezitere gị site na email ma ọ bụ dị ka ozi ederede na mkpanaka gị, dịka ị kọwapụtara na njirimara nke akaụntụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mee oku vidiyo na Mac gị n'ụzọ dị mfe yana ndị ọrụ asatọ
Ebe Fada Luis Felipe Egaña Baraona dijo
Ọ dị mkpa na ndị niile ejikọtara na-arụ ọrụ yana akụrụngwa nwere IOS?
Zaghachi na saịtị nke Fada Luis Felipe Egaña Baraona
The CarPlay ga-abịa ụfọdụ ụdị BMW na ikuku